•	လူအများနှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းကိုနှစ်သက်သူဖြစ်ရမည်။
•	Overtime ဆင်းနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	တစ်ပတ်တစ်ရက် အလှည့်ကျ နားရက်ဖြင့် ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	အလုပ်ချိန် - အလှည့်ကျ အဆိုင်းဖြင့်။
For Insein Branch
•	HR လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ တစ်နှစ်ရှိရမည်။
•	အသက် (20-30) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	ကွန်ပျူတာ (Word,Excel) ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။
Work location Upper Pazundaung Rd, Yangon.
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။ •	စာရင်းဇယားပိုင်နိုင်ရမည်။ •	ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့စိတ်ဓါတ်ရှိရမည်။ (for Zin Htet)
•	ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ •	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။
•	Able to generate sales & Marketing Plan & Develop Sales & Marketing Distribution. •	Ability to beateam player and work under pressure. •	Be self-motivated, proactive & initiative. •	Possessapleasant personality.
•	ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ •	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ ပုဇွန်တောင်စက်ဆန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
•	နယ်ခရီးထွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရမည်။စိတ်ရှည်ပြီးဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ For Satsan Branch
•	မိမိစီမံခန့်ခွဲသည့်အရောင်းအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လူအများနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းကိုနှစ်သက်ပြီးအသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး ...
•	ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ အင်းစိန် လမ်းသစ် Branch တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
•	ရန်ကုန်မြို့အတွင်းကျွမ်းကျင်စွာသွားနိုင်ရမည်။ •	စာရင်းပိုင်းကျွမ်းကျင်ရမည်။ •	သွက်သွက်လက်လက်ရှိရမည်။ •	အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ •	အင်းစိန်မြို့အနီးတ၀ိုက်နေထိုင်သူများေ� ...
• M&E facilities များကို တပ်ဆင်၊ ထိန်းသိမ်း၊ စစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ • Electrical & Mechanical ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများအားလုံးကို Preventive Maintenance ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည်များအား စီစဉ်ဆောင်ရွ ...
Job ads in Maintenance Jobs and in Shan State
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ •	ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ Zin Htet Cement & Building Materials
•	Able to Travel •	High motivation and can able to work under pressure. Cement Whole Sales
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ •	ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ For Mingaladon ဇေကမ္ဘာဝင်:
•	အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သတ်သော ပစ္စည်းများ ၀ယ်ဖူးခြင်းအတွေ့အကြုံရှိပါက ဦးစားပေးမည်။ •	ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။
• Construction Site များ၏ Temporary M&E facilities များကို တပ်ဆင်၊ ထိန်းသိမ်း၊ စစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ • Electrical & Mechanical ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများအားလုံးကို Preventive Maintenance ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည်များအ ...
•	ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍ ၀န်ဆောင်မှုပေးရန်စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရပါမည်။
•	လူအများနှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းကိုနှစ်သက်သူဖြစ်ရမည်။ •	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းပွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	Overtime ဆင်းနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	တစ်ပတ်တစ်ရက် အလှည့်ကျ နားရက်ဖြင့် ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အလုပ်ချိန် - အလ� ...
•	System Implementation - Database Design and optimization. Install application systems Setup with leadership. •	Trouble Shooting - Solving user's errors and some hardware, networking error. •	Support - Maintain Technical and service support with SD teams. •	Other - Traveling to other Township and Oversea.
HR Assistant HR, Training & Recruitment jobs Joblessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon PRO 1 Myanmar Co., Ltd. HR,Training & Recruitment jobs HR,Training & Recruitment jobs HR Assistant Jobs in Myanmar, jobs in Yangon